XOG: Wax badan ka ogow kulankii dhexmaray RW hore Xasan Cali Kheyre & Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna Musharrax xilka madaxweynaha dalka, Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa xalay kulan gaar ah la yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor).
Labadan mas’uul ayaa waxay ku kulmeen hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, iyagoona iska wareystay xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka.
Mr. Kheyre ayaa sheegay in kulan miradhal ah uu la yeeshay madaxweynaha Galmudug Qoorqoor, ayna ka wada hadleen arrimaha doorashada iyo kaalinta Galmudug.
“Waxaan xalay kulan miro dhal ah la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Ahmed Abdi Kaarie, Waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashada & kaalinta Galmudug, sidoo kale waxaan isla eegnay howlaha u qabsoomay Galmudugta loo dhan yahay iyo waxyaabaha horyaalla maamulkiisa.” Ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooga Xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa ku sugan Magaalada Muqdisho tan iyo wixii ka dambeeyay markii xilka ay ka tuureen Golaha Shacabka Soomaaliya.
Ugu dambeyn, Magaalada Muqdisho waxaa ka socdo kulamo kala duwan, kuwaasi oo ay yeelanayaan madaxda maamul Goboledyada iyo Madaxdii hore ee dalka.
Tags: Kulan gaar ah, Xasan Cali Kheyre iyo Qoorqoor